भाइरल हुन गोदावरीको जीर्ण पुलमा ! :: Setopati
भाइरल हुन गोदावरीको जीर्ण पुलमा !
सविता बुढा धनगढी, चैत १०
कैलाली, गोदावरीको जीर्ण पुल। तस्बिरः सबिता बुढा/सेतोपाटी
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१४ की दीपा उपाध्याय टिकटक बनाउन कैलालीको गोदावरी पुगेकी थिइन्।
शनिबार उनी गोदावरीको जीर्ण काठे पुलमा टिकटक बनाउन थालिन्। उनीसँगै आएका साथी पनि पालैपालो भिडिओ खिचिरहेका थिए। उनीहरूले फोटो र सेल्फी पनि लिन भ्याए।
'गोदावरीमा घुमघाम गर्न, यताको भ्युहरू हेर्न आएका हौं,' दीपाले भनिन्।
उनले टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न यहाँ थुप्रै मान्छे आउने सुनाइन्।
'यहाँ रमाइलो ठाउँ रहेछ। रिसोर्टहरू पनि मनपर्‍यो। अनि र पुल पनि छ,' उनले यहाँ आउँदाको अनुभव बताइन्। उनको आफ्नै ठाउँबाट पनि धेरै मान्छे गोदावरीसम्म आउँछन्।
'मलाई टिकटकमा भाइरल हुन मन छ। यो ठाउँमा बनाएको टिकटक भाइरल हुन्छ,' उनले हाँस्दै आउनुको मुख्य कारण खुलाइन्।
दीपाले गोदावारीमा बाटो, दुवैतिरका डाँडाकाँडामा पालुवा पलाउँदै गरेको दृश्य सबभन्दा मन परेको बताइन्।
'पुरानो काठे पुलमा फोटो पनि राम्रो आउने र दृश्य अवलोकन गर्न पनि सहज हुनाले यहाँको धेरै महत्व छ,' उनले भनिन्।
बीमा कम्पनीमा काम गर्ने शारदा न्यौपाने कैलाली, लम्कीदेखि साथीहरूसँगै गोदावरी पुगेकी थिइन्। उनीहरू पनि पुलमा रहेको राष्ट्रिय झण्डामुनि भिडिओ र फोटा खिचिरहेका थिए।
'घुम्न र रमाइलो गर्न आएका हौं,' उनले भनिन्।
गोदावरीका बारेमा अझै जानकारी गराउन सके आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक पनि आउने उनको विश्वास छ।
धनगढीका दीपेन्द्र ओझा स-परिवार आइपुगेका थिए। परिवारसँगै शनिबारको बिदा यहाँ मनाउन पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए। यो पुलले धनगढी र महेन्द्रनगरबाट आउने आन्तरिक पर्यटकको चित्त बुझाएको उनी बताउँछन्।
'गोदावरी क्षेत्र धार्मिक र पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिएकाले पछिल्लो समय यहाँ आउनेहरू बढेका छन्,' दीपेन्द्रले भने।
अहिले पिकनिक 'स्पट' का रूपमा पनि यो क्षेत्र परिचित हुँदै गएको छ। तर गोदावरीको सबभन्दा आकर्षण केन्द्र पुरानो काठे पुल नै हो।
यो पुलमा युवायुवती मात्र नभइ स–परिवार शनिबार वा बिदाका दिन पारेर पुग्ने गरेका छन्। अचेल बच्चाबच्ची, युवायुवती, दम्पत्तिहरू पनि टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा फोटो/भिडिओ बनाउनै भनेर पनि आउँछन्। त्यसैले यहाँ मान्छेको भिड नै जम्मा भएको हुन्छ।
पहिलेपहिले मेला, पर्वमा मात्र आउनेहरू अहिले जुनै बेला घुम्न मन लागे यहाँ पुग्ने बताउँछन्।
यो पुल धेरै वर्षअगाडि बनेको हो। करिब आठ वर्षअघि यसको छेउमै पक्की पुल बन्यो। यसपछि यो काठे पुलमा ‍मोटरगाडी चल्दैनन्। तर धनगढी आउने स्वदेशी पर्यटकदेखि सुदुरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला र भारतका केही ठाउँबाट पनि पर्यटक यहाँ आउँछन्।
गोदावरी क्षेत्र अत्तरिया बजारदेखि सात किलोमिटर दुरीमा पर्छ। गोदावरीलाई सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारका रूपमा पनि लिइन्छ। गोदावरीबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको यात्रा सुरू हुन्छ। गोदावरीमा हरेक दस वर्षमा एक महिनासम्म कुम्भ मेला लाग्ने भएकाले पनि यसको धार्मिक महत्व बढी छ। यहाँ विभिन्न मठमन्दिर र शक्ति पीठहरूका साथै नेपालकै अग्लो हनुमानको मूर्ति पनि छ।
गोदावरी क्षेत्रभित्र पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा सुविधा सम्पन्न होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुल्ने क्रम पनि बढ्दो छ। अझ गोदावरी क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि यो क्षेत्रको महत्व अझै बढेको हो।
गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदका अनुसार गोदावरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित पारेर पर्यटक र दर्शनार्थी संख्या बढाउन डिपिआर तयारी भइरहेको छ।
'हामी डिपिआर प्रक्रियामा छौं। गोदावरीदेखि बुढीतोलासम्म पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ,' उनले भने।
पुरानो काठे पुल मर्मत-सम्भारका लागि भने सडक बोर्डसँग समन्वय गरेर लगानी ल्याउने योजना रहेको पनि उनले बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १०, २०७७, १२:१०:००